ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို မည်ကဲ့သို့ခြေရာခံထောက်လှန်းခြေမှုန်းနိုင်သလဲဆိုတာ
ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို မည်ကဲ့သို့ခြေရာခံထောက်လှန်းခြေမှုန်းနိုင်သလဲဆိုတာ … …
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော လေ့လာဖွယ်တခုဖြစ်ပြီး ယခုမှစတင်လေ့လာမည့် ဝါသနာတူများအတွက် နားလည် သဘောပေါက်လွယ်စေရန် တင်ပြထားပါသည် .
ရေငုပ်သင်္ဘောများကိုရှာဖွေ တိုက်ခိုက် ကာကွယ်ရသော စစ်ဆင်ရေးကို Antisubmarine warfare အတိုကောက် ASW ဟုခေါ်သည်. ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် ဇာတ်ကောင် ၂ နေရာပါဝင်ပြီး
submarine များနှင့် ရေပေါ်တွင်ရှိသော သင်္ဘောများဖြစ်သည့် surface ship များဟူ၍ပါဝင်သည်. ထိုဇာတ်ကောင် ၂ နေရာ၌ surface ship များအဖို့ submarine များသည်
အမှောင်ထဲမှသေမင်းတမာန်များဖြစ်နေပြီး sub များအတွက်မူကား surface ship များသည် မိမိခြေမှုန်းရမည့် သားကောင်းများပင် . ထို့အတွက်ကြောင့် surface ship များအနေနှင့် sub များကို
အချိန်မနှောင်းခင် ရှာဖွေနိုင်ရန်မှာလွန်စွာအရေးကြီးလှပေသည် . ထိုသို့ထောက်လှမ်းရာတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိသည့်အနက် ထိုနည်းလမ်းမျိုးစုံတွင် အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်နေသည်မှာ sonar စနစ်ပင်ဖြစ်သည်.
sonar ဖြင့်အာရုံခံပုံဖမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ လင်းနို့ငှက်များ၏ အာရုံခံရုပ်လုံးဖော်စနစ်နှင့်ဆင်တူသည် . Sonar ၏အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မိမိထံမှအသံလှိုင်း sonic wave ကို စတင်ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီး
တဘက်အရာဝတ္တု ကိုထိမှန်စေလျက် ထိုမှတဆင့်ပြန်၍လာသော အသံလှိုင်းကို ပြန်လည်လက်ခံကာ ပုံဖော်ယူခြင်းဖြစ်ကာ အသံလှိုင်းစတင်လွှတ်ပေးသောအရာကို transmitter ဟုခေါ်ပြီး အသံလှိုင်းပြန်လည်လက်ခံပေးသည့်အရာကို receiver ဟုခေါ်သည်.
ထို Sonar ဖြင့်ထောက်လှန်းသောစနစ်တွင် အသုံးပြုပုံနှင့် အသုံးဝင်ပုံများအရ နည်းလည်းမျိုးစုံရှိပေသည်. Surface ship အဖို့ သာမန်အားဖြင့် အနိမ့်ဆုံးပါဝင်ရမည့် sonar ၁ မျိုးမှာ သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည့် sonar မျိုးများပင်ဖြစ်သည်.
သင်္ဘောကိုယ်ထည်အောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်နိုင်မည့် hull mounted sonar . Bow mounted sonar မျိုးပင်ဖြစ်သည် . ၎င်း sonar စနစ်များသည် သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အလျောက် မိမိသင်္ဘောမှထွက်သော
ဆူညံသံများ တုန်ခါသံများကြောင့် အသံလှိုင်းဖမ်းယူလက်ခံမှု့များကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသဖြင့် ထောက်လှန်းနိုင်မှု့ကို အတားဆီးများဖြစ်စေသည် .
ထိုကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် သင်္ဘော၏အတွင်းဆူညံသံများကို အထိုက်အလျောက်လျော့ချနိုင်မည့် sonar စနစ်များအသုံးပြုလာကြသည် . ၎င်း စနစ်များမှာတော့ သင်္ဘော၏နောက်ပိုင်းတွင် တွဲလျက်ချိတ်ဆက်ထားကာ
sonar စနစ်များကို သင်္ဘောကိုယ်ထည်နှင့်ဝေးအောင်ပြုလုပ်ထားသည့် light towed array sonar များ multifunctional towed array ခေါ် MFTA စနစ်များ သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှ ရေအောက်အနက်များစွာသို့ချကာ
အာရုံခံနိုင်သော VDS ခေါ် variable depth sonar များပင်ဖြစ်ကြလေသည်. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် sonar စနစ်များမှာ transmitter နှင့် receiver ၂ မျိုးပါသည့် active sonar system များဟုခေါ်သည်.
သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပဲ အဝေးတနေရာတခုထိ ပို့လွှတ်ကာ မိမိသင်္ဘောထံသို့ ပြန်လည်သတင်းအချက်လက်များပေးပို့နိုင်သည့် sonar စနစ်များလည်းရှိကြသည် .
၎င်း sonar စနစ်များတွင် sonobuoy များ dipping sonar များ MAD ခေါ် magentic anormaly detector များ နှင့် အခြားသောစနစ်များပါဝင်ကြသည်.
၎င်း sonar စနစ်များသည် မိမိသင်္ဘောနှင့်အဝေးတနေရာမှနေကာ ရေငုပ်သင်္ဘောများကို အာရုံခံလျက် သတင်းအချက်လက်များကို တဆင့်ပြန်ပေးသောစနစ်များ ဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာ
ထို sonar စနစ်များကို မိမိသင်္ဘော၏ အဝေးတနေရာသို့ chopper များဖြင့်လည်ကောင်း speed မြန်သော boat လေးများဖြင့်လည်းကောင်း လေယာဉ်ပျံများဖြင့်လည်းကောင်း
မိမိသင်္ဘောပေါ်မှနေ၍ အဝေးသို့ပစ်ိနိုင် ပို့လွှတ်နိင်မည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးချကာ ပို့လွှတ်ကြရမည်ဖြစ်သည် . ထို အဝေးသို့ပို့လွှတ်နိုင်ကြသည့် sonar များသည် မိမိသင်္ဘောထံချဉ်းကပ်လာနိုင်သော
sub များကို မိမိသင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားသော sonar စနစ်များ လက်လှမ်းမမှိခင် ကြိုတင်ကာသတင်ပေးပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိသင်္ဘော၏ ထောက်လှမ်းနိုင်သောအကွာအဝေးများကို ချဲ့ကာ sub များကို ပိုမိုချိန်းခြောက်နိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်.
ထို sonar စနစ်များတွင် MAD များနှင့် အချို့သော sonobuoy များမှာ passive sonar စနစ်များဖြစ်ကြသည် . passive sonar စနစ်ဆိုသည်မှာ မိမိထံတွင် အသံလှိုင်းများထုတ်လွှတ်သည့် စနစ်မပါဝင်ကြပဲ
တဘက်ကလာသောအသံများကိုသာလက်ခံနိုင်သည့် receiver များသာပါဝင်ကြသော စနစ်များကိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်.passive sonobuoy များသည် ရေငုပ်သင်္ဘောထံမှထွက်လာသည့် တုန်ခါသံ ဆူညံသံများကို အာရုံခံကာ ထောက်လှမ်းသည့်
sonobuoy များဖြစ်ကြပြီး MAD များမှာ ရေအောက်တွင်ရှိသောသာမာန် ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းညွှန်းကိန်းများကိုအာရုံခံပြီး သံထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေငုပ်သင်္ဘောကိုယ်ထည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်
ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းညွှန်းကိန်းပြောင်းလည်းမှု့များကို တိုင်းတာတွက်ချက်ကာ ရေငုပ်သင်္ဘောများကို ထောက်လှမ်းသည့်စနစ်ပင်ဖြစ်သည်. ထိုကဲ့သို့ မိမိသင်္ဘောမှ အဝေးတနေထိထောက်လှမ်းနိုင်သည့်
sonar စနစ်များကို အသုံးပြုရန် ကြားတွင်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့် ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြု ရန် chopper သို့ တခြားတခုခုရှိရန်လိုအပ်သည်မှာ ၎င်းစနစ်များ၏ တန်ဖိုးကြီးမှု့ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ..
Crd..Against the submarines
ရငေုပျသင်ျဘောတှကေို မညျကဲ့သို့ခွရောခံထောကျလှနျးခွမှေုနျးနိုငျသလဲဆိုတာ … …
စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးသော လလေ့ာဖှယျတခုဖွဈပွီး ယခုမှစတငျလလေ့ာမညျ့ ဝါသနာတူမြားအတှကျ နားလညျ သဘောပေါကျလှယျစရေနျ တငျပွထားပါသညျ .
ရငေုပျသင်ျဘောမြားကိုရှာဖှေ တိုကျခိုကျ ကာကှယျရသော စဈဆငျရေးကို Antisubmarine warfare အတိုကောကျ ASW ဟုချေါသညျ. ထိုစဈဆငျရေးတှငျ အဓိကအားဖွငျ့ ဇာတျကောငျ ၂ နရောပါဝငျပွီး
submarine မြားနှငျ့ ရပေျေါတှငျရှိသော သင်ျဘောမြားဖွဈသညျ့ surface ship မြားဟူ၍ပါဝငျသညျ. ထိုဇာတျကောငျ ၂ နရော၌ surface ship မြားအဖို့ submarine မြားသညျ
အမှောငျထဲမှသမေငျးတမာနျမြားဖွဈနပွေီး sub မြားအတှကျမူကား surface ship မြားသညျ မိမိခွမှေုနျးရမညျ့ သားကောငျးမြားပငျ . ထို့အတှကျကွောငျ့ surface ship မြားအနနှေငျ့ sub မြားကို
အခြိနျမနှောငျးခငျ ရှာဖှနေိုငျရနျမှာလှနျစှာအရေးကွီးလှပသေညျ . ထိုသို့ထောကျလှမျးရာတှငျ နညျးလမျးမြိုးစုံရှိသညျ့အနကျ ထိုနညျးလမျးမြိုးစုံတှငျ အဓိကအားဖွငျ့ပါဝငျနသေညျမှာ sonar စနဈပငျဖွဈသညျ.
sonar ဖွငျ့အာရုံခံပုံဖမျးခွငျးဆိုသညျမှာ လငျးနို့ငှကျမြား၏ အာရုံခံရုပျလုံးဖျောစနဈနှငျ့ဆငျတူသညျ . Sonar ၏အလုပျလုပျပုံမှာ မိမိထံမှအသံလှိုငျး sonic wave ကို စတငျထုတျလှတျလိုကျပွီး
တဘကျအရာဝတ်တု ကိုထိမှနျစလေကျြ ထိုမှတဆငျ့ပွနျ၍လာသော အသံလှိုငျးကို ပွနျလညျလကျခံကာ ပုံဖျောယူခွငျးဖွဈကာ အသံလှိုငျးစတငျလှတျပေးသောအရာကို transmitter ဟုချေါပွီး အသံလှိုငျးပွနျလညျလကျခံပေးသညျ့အရာကို receiver ဟုချေါသညျ.
ထို Sonar ဖွငျ့ထောကျလှနျးသောစနဈတှငျ အသုံးပွုပုံနှငျ့ အသုံးဝငျပုံမြားအရ နညျးလညျးမြိုးစုံရှိပသေညျ. Surface ship အဖို့ သာမနျအားဖွငျ့ အနိမျ့ဆုံးပါဝငျရမညျ့ sonar ၁ မြိုးမှာ သင်ျဘောကိုယျထညျတှငျတပျဆငျထားနိုငျသညျ့ sonar မြိုးမြားပငျဖွဈသညျ.
သင်ျဘောကိုယျထညျအောကျခွတှေငျတပျဆငျနိုငျမညျ့ hull mounted sonar . Bow mounted sonar မြိုးပငျဖွဈသညျ . ၎င်းငျး sonar စနဈမြားသညျ သင်ျဘောကိုယျထညျတှငျတပျဆငျထားသညျ့အလြောကျ မိမိသင်ျဘောမှထှကျသော
ဆူညံသံမြား တုနျခါသံမြားကွောငျ့ အသံလှိုငျးဖမျးယူလကျခံမှု့မြားကိုအနှောကျယှကျဖွဈစသေဖွငျ့ ထောကျလှနျးနိုငျမှု့ကို အတားဆီးမြားဖွဈစသေညျ .
ထိုကွောငျ့ နောကျပိုငျးတှငျ သင်ျဘော၏အတှငျးဆူညံသံမြားကို အထိုကျအလြောကျလြော့ခနြိုငျမညျ့ sonar စနဈမြားအသုံးပွုလာကွသညျ . ၎င်းငျး စနဈမြားမှာတော့ သင်ျဘော၏နောကျပိုငျးတှငျ တှဲလကျြခြိတျဆကျထားကာ
sonar စနဈမြားကို သင်ျဘောကိုယျထညျနှငျ့ဝေးအောငျပွုလုပျထားသညျ့ light towed array sonar မြား multifunctional towed array ချေါ MFTA စနဈမြား သင်ျဘောကိုယျထညျမှ ရအေောကျအနကျမြားစှာသို့ခကြာ
အာရုံခံနိုငျသော VDS ချေါ variable depth sonar မြားပငျဖွဈကွလသေညျ. အထကျတှငျဖျောပွခဲ့သညျ့ sonar စနဈမြားမှာ transmitter နှငျ့ receiver ၂ မြိုးပါသညျ့ active sonar system မြားဟုချေါသညျ.
သင်ျဘောကိုယျထညျတှငျ တပျဆငျထားခွငျးမရှိပဲ အဝေးတနရောတခုထိ ပို့လှတျကာ မိမိသင်ျဘောထံသို့ ပွနျလညျသတငျးအခကျြလကျမြားပေးပို့နိုငျသညျ့ sonar စနဈမြားလညျးရှိကွသညျ .
၎င်းငျး sonar စနဈမြားတှငျ sonobuoy မြား dipping sonar မြား MAD ချေါ magentic anormaly detector မြား နှငျ့ အခွားသောစနဈမြားပါဝငျကွသညျ.
၎င်းငျး sonar စနဈမြားသညျ မိမိသင်ျဘောနှငျ့အဝေးတနရောမှနကော ရငေုပျသင်ျဘောမြားကို အာရုံခံလကျြ သတငျးအခကျြလကျမြားကို တဆငျ့ပွနျပေးသောစနဈမြား ဖွဈကွသညျ့အားလြျောစှာ
ထို sonar စနဈမြားကို မိမိသင်ျဘော၏ အဝေးတနရောသို့ chopper မြားဖွငျ့လညျကောငျး speed မွနျသော boat လေးမြားဖွငျ့လညျးကောငျး လယောဉျပြံမြားဖွငျ့လညျးကောငျး
မိမိသင်ျဘောပျေါမှနေ၍ အဝေးသို့ပဈိနိုငျ ပို့လှတျနိငျမညျ့နညျးလမျးအမြိုးမြိုးကို အသုံးခကြာ ပို့လှတျကွရမညျဖွဈသညျ . ထို အဝေးသို့ပို့လှတျနိုငျကွသညျ့ sonar မြားသညျ မိမိသင်ျဘောထံခဉျြးကပျလာနိုငျသော
sub မြားကို မိမိသင်ျဘောကိုယျထညျတှငျ တပျဆငျထားသော sonar စနဈမြား လကျလှမျးမမှိခငျ ကွိုတငျကာသတငျပေးပို့နိုငျခွငျးဖွငျ့ မိမိသင်ျဘော၏ ထောကျလှမျးနိုငျသောအကှာအဝေးမြားကို ခြဲ့ကာ sub မြားကို ပိုမိုခြိနျးခွောကျနိုငျပမေညျဖွဈသညျ.
ထို sonar စနဈမြားတှငျ MAD မြားနှငျ့ အခြို့သော sonobuoy မြားမှာ passive sonar စနဈမြားဖွဈကွသညျ . passive sonar စနဈဆိုသညျမှာ မိမိထံတှငျ အသံလှိုငျးမြားထုတျလှတျသညျ့ စနဈမပါဝငျကွပဲ
တဘကျကလာသောအသံမြားကိုသာလကျခံနိုငျသညျ့ receiver မြားသာပါဝငျကွသော စနဈမြားကိုဆိုခွငျးဖွဈသညျ.passive sonobuoy မြားသညျ ရငေုပျသင်ျဘောထံမှထှကျလာသညျ့ တုနျခါသံ ဆူညံသံမြားကို အာရုံခံကာ ထောကျလှမျးသညျ့
sonobuoy မြားဖွဈကွပွီး MAD မြားမှာ ရအေောကျတှငျရှိသောသာမာနျ ကမ္ဘာ့သံလိုကျစကျကှငျးညှနျးကိနျးမြားကိုအာရုံခံပွီး သံထညျဖွငျ့ပွုလုပျထားသော ရငေုပျသင်ျဘောကိုယျထညျကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့
ကမ္ဘာ့သံလိုကျစကျကှငျးညှနျးကိနျးပွောငျးလညျးမှု့မြားကို တိုငျးတာတှကျခကျြကာ ရငေုပျသင်ျဘောမြားကို ထောကျလှမျးသညျ့စနဈပငျဖွဈသညျ. ထိုကဲ့သို့ မိမိသင်ျဘောမှ အဝေးတနထေိထောကျလှမျးနိုငျသညျ့
sonar စနဈမြားကို အသုံးပွုရနျ ကွားတှငျခြိတျဆကျပေးနိုငျသညျ့ ကွားခံအဖွဈအသုံးပွု ရနျ chopper သို့ တခွားတခုခုရှိရနျလိုအပျသညျမှာ ၎င်းငျးစနဈမြား၏ တနျဖိုးကွီးမှု့ပငျဖွဈပါကွောငျးတငျပွအပျပါသညျခငျဗြာ..
Previous Article သားအိမ်ထဲမှာ မမွေးသေးတဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံရိပ်များ (၁၁ပုံ)
Next Article အသီးမြိုးပေါငျး ၄၀ ပါဝငျသီးပှငျ့တဲ့ သဈပငျတဈမြိုးကို တီထှငျစိုကျပြိုးခဲ့တဲ့ အမြိုးသားတဈဦး